Kushanya kweHawaii kuchiri kukanganiswa zvakanyanya nedenda repasi rose re COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Kushanya kweHawaii kuchiri kukanganiswa zvakanyanya nedenda repasi rose re COVID-19
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Hawaii Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Yese yekuHawaii yekushanya kwevashanyi munaFebruary 2021 yaive madhora mazana matatu nemakumi matatu neshanu nemakumi matatu neshanu emadhora - pasi pa385.3%
Paive nevashanyi 90,776 muHawaii pane chero zuva rakapihwa muna Kukadzi 2021
Paive ne250,052 2020 vashanyi muHawaii pazuva munaFebruary XNUMX
Muna Kukadzi, vafambi vazhinji vanosvika vachibva kunze kwenyika uye vanofamba pakati-mudunhu vanogona kupfuura zvaitarisirwa neHurumende zvezuva gumi
Indasitiri yevaenzi yeHawaii inoenderera ichikanganiswa nedenda repasi rose re COVID-19. Zvinoenderana nenhamba dzekutanga dzakaburitswa ne Hawaii Tourism Chiremera (HTA), avhareji yekuverenga zuva nezuva yakaratidza kuti paive nevashanyi makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemakumi manomwe nevatanhatu muHawaii chero zuva rakapihwa munaKukadzi 90,776, zvichienzaniswa nevashanyi mazana maviri nemakumi maviri nemaviri nemakumi mashanu nevaviri pazuva muna Kukadzi 2021.
Munguva yaFebruary, vafambi vazhinji vanosvika vachibva kunze kwenyika uye vanofamba pakati-mudunhu vanogona kupfuura zvaitarisirwa neHurumende kwemazuva gumi kuzvisarudzira neyakajeka mhedzisiro yeCOVID-10 NAAT mhedzisiro kubva kuTrusted Testing Partner kuburikidza nehurongwa hweHurumende Hwakachengeteka. Vafambi vese vePacific-Pacific vanopinda muchirongwa chekuyedza kufamba-mberi vaifanirwa kuve nemhedzisiro yakaipa vasati vaenda kuHawaii. Kauai County yakaramba ichimbomira kutora chikamu muchirongwa cheSafe Travels chevapfuuri vePacific, asi vafambi vepakati pezvitsuwa vanga vari muHawaii kweanopfuura mazuva matatu vaigona kupfuudza kuvharirwa neyakajeka mhedzisiro. Vafambi veTrans-Pacific kuenda kuKauai vakapihwa mukana wekupinda muchirongwa chekuyedza-uye shure-kwekuyedza kuyedza ku "resort bubble" chivakwa senzira yekupfupisa nguva yavo pakuisa vanhu voga. Iwo matunhu eHawaii neMaui aivewo nekwavo kwega kwega kwekuisa vanhu muna Kukadzi. Pamusoro pezvo, iyo US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) yakaramba ichisimbisa "Conditional Sailing Order" pane ese ngarava.
Vashanyi 235,283 2021 vakashanya kuenda kuHawaii nebasa remhepo munaKukadzi 828,056, zvichienzaniswa nevashanyi 164,861 53.6 vakauya nendege uye ngarava dzegungwa gore rapfuura. Vazhinji vevashanyi vaibva kuUS West (63,899, -67.1%) uye US East (695, -99.4%). Zvakare, 493 vashanyi vakauya kubva kuJapan (-99.2%) uye vashanyi makumi mana nevapfumbamwe vaibva kuCanada (-5,336%). Paive nevashanyi zviuru makumi mashanu nezvishanu kubva kuAse Mamwe Masoko Enyika Dzese (-93.2%). Vazhinji vevaenzi ava vaibva kuGuam, uye vashoma vashanyi vaibva kuAsia Asia, Europe, Latin America, Oceania, Philippines nePacific Islands.
Panyaya yevhareji yekuverengwa kwevanhu zuva nezuva, paive nevashanyi makumi matanhatu nemakumi mairi nemakumi maviri nevapfumbamwe vaivapo muHawaii chero zuva rakapihwa muna Kukadzi kubva kuUS West (-60,249%), 42.7 vashanyi vanobva kuUS East (-26,996%), vashanyi 59.0 vanobva kuJapan (-430%), 98.2 vashanyi vanobva Canada (-488%), uye 98.2 vashanyi vanobva kune All Other International Markets (-2,613%), pasi zvakanyanya zvichienzaniswa naFebruary 89.9.
Yese mari yevaenzi yakashandiswa muna Kukadzi 2021 yaive $ 385.3 mamirioni (-73.6%). Izvi zvaimiririra avhareji yemamirioni emadhora 13.8 pazuva, zvichienzaniswa nemamirioni 50.3 emadhora pazuva munaKukadzi 2020. Vashanyi vekuUS West vakashandisa mamirioni emadhora 9.4 pazuva (-52.2%). Vashanyi vekuUS East vakashandisa $ 4.1 miriyoni pazuva (-71.3%). Vashanyi vanobva kuJapan vakashandisa $ 86.1 zviuru pazuva (-98.5%). Vashanyi vanobva kuCanada vakashandisa $ 80.6 zviuru pazuva (-98.4%). Kushandisa data revashanyi kubva kune mimwe misika kwaisawanikwa.
Paive ne2,556 trans-Pacific ndege uye 532,220 zvigaro zvemhepo zvakashandira maHawaiian Islands munaKukadzi 2021. Izvi zvakaenzana kusvika kwendege dzinosvika 91 uye 19,008 zvigaro zvemhepo pazuva, izvo zviri zvishoma kudarika 172 dzendege uye zvigaro makumi matatu neshanu nezvitatu pazuva paKukadzi 38,186. Kwakange kusina zvigaro zvakarongwa kubva kuOceania, uye zvigaro zvishoma zvakarongwa kubva kuAsia Asia, Japan, Canada, US East, US West, uye Dzimwe nyika zvichienzaniswa negore rapfuura.
Yakawanda inodhura-inoziva vhezheni yeEmirates inogona kubuda ...